कवि नेपालका दुई कृतिको चर्चा - urlabari
कवि नेपालका दुई कृतिको चर्चा
काठमाडौं, १९ वैशाख – कवि एवं समालोचक डा. देवी नेपालको ४५औं जन्मोत्सव अवसर पारेर उनका कृतिमाथि परिचर्चा भयो । सोमबार नेपाल निकै उत्साहित देखिन्थे । उनको जन्म दिनको खुसी बाँड्न लेखक र साहित्यप्रेमी भला भएका थिए ।
जन्मदिनको उल्लासमा कवि नेपालका छन्दोबद्ध कविताहरुको सीडी र छन्दबारे ज्ञान दिने पुस्तकबारे परिचर्चा कार्यक्रम राखियो । करिब चार सय छन्दको विशेषता र उदाहरण समेटिएको ‘छन्द–पराग’ र अडियो सीडी ‘छन्द–तरङ्ग’ बारे प्रा.डा. महादेव अवस्थी र प्रा. हेमचन्द्र नेपालले टिप्पणी गरे । कार्यक्रममा वक्ताहरूले डा. नेपालले प्रचलित र अप्रचलित छन्दहरुबारे निकै मिहिनेतपूर्वक पुस्तक लेखेर छन्द कविताको बिस्तारमा टेवा पुर्‍याएको बताए ।
‘छन्द–पराग’ ०६२ सालमा प्रकाशित भएको पुस्तकलाई परिमार्जित गरी गतवर्ष ऐरावती प्रकाशनबाट दोस्रो संस्करण आएको थियो । सो पुस्तकमा वार्णिक, मात्रिक, लोक, मुक्त, बहर र अंग्रेजी कविताको लय विधान गरी तीन सय ८० वटा छन्दको लक्षण र उदाहरण दिँदै लेखन सीप समेत सिकाइएको छ । समालोचक डा. रामप्रसाद ज्ञवाली र साहित्यकार दाहाल यज्ञनिधिले कवि नेपालको व्यक्तित्व र कृतित्वबारे चर्चा गरेका थिए ।
त्यस्तै ‘छन्द–तरङ्ग’ मा विभिन्न १७ वटा छन्दमा रचिएका २१ कविता संकलित छन् । सो सिडीमा कवि नेपालको आवाजमा रहेको छ भने अशोक राईले संगीत दिएका छन् ।
सो कार्यक्रम अनाममण्डली र अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली गजल मञ्च तथा छन्द अलङ्कार अनलाइन टेलिभिजनले संयुक्त रुपमा गरेका थिए ।